Soomaaliland - Wikipedia
jamhuuriyada barakaysan ee geeska
Qoraalka boggan waa mid aad u dheer ama u qoran nidaam khalad ah ama qaab daran. Fadlan naga caawi sidaan u horumarin lahayn maqaalkan. Hadii aad aqoon u leedahay u nidaami sida ugu saxsan.
Soomaaliland (Af Ingiriis: Somaliland; Af Carabi: صوماليلاند Ṣūmālīlānd, أرض الصومال Arḍ aṣ-Ṣūmāl), si rasmi ah Jamhuuriyada Soomaaliland (Af Ingiriis: Republic of Somaliland, Af Carabi: جمهورية صوماليلاند Jumhūrīyat Ṣūmālīlānd), waa dal ku taala Geeska Afrika, waxay xad la leedahay Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya. Somaliland waxey kamid tahay dhulkii Maxmiyada Ingiriis ee Somaliland ee Ingiriis ku gumaysan jirey. Waxeyna xornimadda qaadatey Juun 26 1960 afar maalmood ka dibna waxay la midowday Soomaliya inteeda kale oo Talyaanigu guumeysan jiray. magaalada caasimada wa Hargaysa. Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo ahaan jirey hogaamiyihii Ururkii Dhaqdhaqaaqa Wadaniga Somaliyeed SNM, ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynahii ugu horeeyay ee maamulka Somaliland. Waxaa ku xigey Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaaloo noqdey Madaxweynihii Labaad ee Somaliland, waxaana ka danbeeyay Daahir Rayaale Kaahin. Kahina waxa ku xigay Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). Madaxweynaha maanta waa Muuse Biixi Cabdi. Somaliland waxaa ka jira saddex xisbi siyaasadeed oo kala ah Kulmiye, Wadani iyo UCID.
Republic of Somaliland (Af-Ingiriisi)
جمهورية صوماليلاند (Af-Carabi)
لا إله إلا الله محمد رسول الله (Carabi)
"Ilaah ma jiro Alle mooye; Muxammed waa rasuulka Alle"
Waa Magaalada ugu balaaran Hargeysa
Af Soomaali Af maay
Madaxweynenimo leh Dastuur Jamhuuriya
- Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
- madaxwayne kuxigeen Cabdiraxmaan Saylici
- Gudoomiyaha Golaha Baashe Maxamed Faarax
- Aqalka sare Golaha Guurtida
Dowlada iyo Awooda
- Ku dhawaaqdey May 18, 1991
- Aqoonsiga Dal aan la aqoonsanayn
- Guud ahaan 137,600 km2
- 2013 qiyaasta 4,500,000
- Mugga Dadka 25/km2
- Guud ahaan $320 million
- Qof qof $577
Somaliland shilling (SSH)
a. Qiimeynta aheyn sida Somaliland waa [aqoonsi diblomaasiyadeed [
1.1 Wakhtiyadii Hore
1.2 Wakhtigii Diinta Islaamka
1.3 Saldanadihii hore ee casriga ahaa
1.4 Maxmiyaddii British Somaliland
1.5 Dawladii Somaliland
1.6 Xoriyadii 1960 iyo wixii kadanbeeyay
1.7 1961 kacdoon ka reer Somaliland
1.8 Inqilaabkii 21 oktober iyo wixii kasoobaxay
1.9 Xasuuqii Isaaq ama Xasuuqii Somaliland
1.10 Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya
1.11 Ku dhawaaqidii Maxadbanaanida
1.12 Afti u qaadista dastuurka Somaliland 2001
2.2 Magaalooyinka Waawayn
3 Dowlada iyo Siyaasada
3.2 Xidhiidhka Dibada
3.3 Doorashooyinka Somaliland
3.7 Maalinta Madaxbanaanida
4.2 Sahaminta shidaalka
5.1 Maalmaha la Xuso
7 Warbixin Kale
7.1 Goobaha Dalxiiska
Sidoo kale eeg: Taariikhda Somaliland
leftBoodey, wuxuu ahaa faraskii Ismaaciil Mire.
Somaliland waa magac aad ucusub marka la eego taariikhda uu maamulkani leeyahay somaliland waxaa horay loogu magacaabijiray dhulkii uduga iyo cadarka iyo bukhuurka ama uduga waa sida ay u yaqaaneen masaaridii horee. halka giriigii hore ay u yaqaaneen dhulkii berbera waa halka uu kasoo jeedo magaca berbera xiligii muslimka amaba qarniyadii uu muslimku soo gaadhay somaliland waxa looyaqaanay dhulkii saylac ugu danbayntii xiligan aan joogno waxa lagu magacaabaa somaliland.
Sidoo kale eeg: Laas Geel
Sidoo kale eeg: Dhambalin iyo Dhaymoole
Farshaxanka dhagaxa weyn ee loo yaqaan 'Neolithic rock art' ee dhismaha Laas Geel oo muujinaya sac geeso dheer leh.
Taariikhdii bilawga ahayd ee casri jaahiligii Somaliland waxay ku taal geeska Afrika, dhinaca Waqooyi galbeed waxa ka xigay deris la tahay dalka Jamhuuriyada Jabouti, galbeedna waxaa ka xiga Ethiopia, barina waxaa ka xiga somalia. Tirada dadka Somalilad waxaa lagu qiyaasaa 5 malyan iy badh. Baaxadda dhulka ay ku fadhido Somaliland waa 139,000 km2. Somaliland waxaa dhinaca waqooyiga ka xiga badda cas oo ku fadhida xeeb dhererkodu yahay 908 km2. Somaliland oo leh taariikh aad u balaadhan dadkuna aanu wada aqoon. Waxay kamid tahay meelaha ugu horraysay ay ka hana qaaday ilbaxnimada adduunku. Dadka taariikhda ku xeeldheeri waxay sheegeen in farraaciintii hore asalkoodu Somali kasoo jeedaan. Deganaana jireen dhulka xeebaha badda cas, taasoo markii danbana ay xidhiidh qoto dheer la lahaayeen Somaliland. Waxaana xaddaaradda Somaliland ku simantahay ilaa 7000 sanadood ciise hortii.
Wakhtigii Diinta Islaamka
Sidoo kale eeg: Saldanadi Ifat
Sidoo kale eeg: Saldanadii Cadal
Suldaanka reer Adal (midig) iyo ciidankiisa oo la dagaallamaya King Yagbea-Sion iyo raggiisa. Laga soo bilaabo Le livre des Merveilles, qarnigii 15aad.
Burburka Saldanadii Cadal ee Saylac, Awdal.
Markii diintu soo degtay qarnigii 7aad, geeska Afrika waxay noqotay meel aad u muhiima markii uu muslimay boqorkii Xabashida ee Nataashi. Waxaana xeebaha Somaliland ahaayeen meel istiraaji ah oo asxaabtii usoo xijrootay. Qarnigii 13naad waxaa culimadii carbeed ee dalka timid kadhiseen saldanad la odhan jiray Bebad oo ay xukumi jirtay boqortooyadii Walaashma. Waana markii koowaad inta taariikhda lagu hayo qabaa'ilkii Somalidu yeeshaan maamul dhexe.
Somaliland waxaa ay kamid tahay bariga Afrika marka laga yimaado Itoobiya dalkii ugu horreyey ee ay ka hanaqaaday maamul dawladeed, inkastoo aan runta laga sheegin taariikhda dhab ah ee Somaliland haddana waxaan muran ku jirin in Somaliland qarnigii 15naad ay lahayd dawlad dunida laga ictiraafsanyahay gaar ahaana markii uu hoggaanka qabtay Immam Ahmed Qasali( Guray). Maamulkaas oo markii danbe la magac baxday dawladii Awdal. Xukumina jirtay inta u dhaxaysa xeebaha badda cas ilaa Herer.
Saldanadihii hore ee casriga ahaa
Sidoo kale eeg: Dowladii Darawiish iyo Dhulka Biritishka ee Somaliland
Khariidadda Jarmalka qarnigii 19-aad oo muujinaya Suldaan Nuur Degaanka badhtamaha Somaliland
Calankii British Somaliland.
Horraantii xilligii casriga ahaa, dowladihii kala dambeeyay ee Saldanadii Adal iyo Ajuran Sultanate waxay bilaabeen inay ka hanaqaadaan Soomaaliya. Kuwaas waxaa ka mid ahaa Isaaqa Saldanada iyo Habr Yunis Sultanate.
Hawlgalkii ugu horreeyay ee dhexmara Soomaalida gobolka iyo Ingriiska wuxuu ahaa 1827 "Maqaallo Saaxiibtinimo iyo Ganacsi oo u dhexeeya Qabiilka Habr Awal iyo England. Tan waxaa xigay heshiis Ingiriis ah oo lala galay Badhasaabkii Saylac 1840. Ka dib hawlgal ayaa la bilaabay inta u dhaxaysa Ingiriiskii iyo odayaashii Habar Garxajis iyo Habar Toljaala ee reeraha Isaaqa 1855, sanad ka dib ayaa la soo gabagabeeyey "Qodobadii Nabadda iyo Saaxiibtinimada" ee u dhexeeyey Shirkadda Habar Awal iyo East India Company. kuna dhammaaday heshiisyadii rasmiga ahaa ee Ingiriisku la saxeexday wixii hadda ka dambeeya qabiilooyinkii 'British Somaliland', oo dhacay intii u dhexeysay 1884 iyo 1886 (heshiisyada waxaa lala saxeexday Habar Awal, Gadabursi, Habar Toljaala, Habar Garxajis, Esa, iyo beelaha Warsangali), kan waxay gogol xaar u ahayd Ingriisku inuu ka sameeyo maxmiyad goboleed loogu magac daray British Somaliland, Ingriiskuna wuxuu gaashaan u ahaa maxakamadda Cadan waxayna u maamushay sidii qayb ka mid ah Bri tish India ilaa 1898. British Somaliland ka dibna waxaa maamulayay Xafiiska Arimaha Dibada ilaa 1905, ka dibna Xafiiska Gumeysiga
Maxmiyaddii British Somaliland
Sidoo kale eeg: Ololaha Somaliland iyo Ololaha Somaliland (1920)
Sidoo kale eeg: Duulaankii Talyaanigu ku qaaday British Somaliland
Wargeyska Corriere della Sera ee ka soo baxa dalka Talyaaniga oo ka hadlaya bilowgii weerarkii British Somaliland.
Duqeyn diyaaradeed oo lagu garaacay qalcado Dowladii Deraviish ah Taleex..
Heshiisyada iyo isweydaarsiga Waraaqaha ee u dhexeeya Dawladda Boqortooyada Ingiriiska iyo Dawladda Somaliland oo ku lammaan Xoriyadda Somaliland.
Shirweynihii dastuurka maxmiyadda British Somaliland, London, May 1960 kaas oo lagu go’aamiyey in 26 Juun ay noqoto maalinta Xorriyadda, sidaasna lagu saxeexay 12 May 1960. Weftiga Somaliland: Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Axmed Xaaji Ducaale, Cali Garaad Jaamac iyo Xaaji Ibraahim Nuur. Laga soo bilaabo Xafiiska Gumeysiga: Ian Macleod, D. B. Hall, H. C. F. Wilks (Xoghaye).
Ololaha Somaliland, oo sidoo kale loogu magac daray Dagaalkii Anglo-Somalia ama Dagaalkii Dervish, wuxuu ahaa safarado milateri oo isdaba joog ah oo ka dhacay intii u dhaxeysay 1900 ilaa 1920 geeska Afrika, oo ay iskaga hor yimaadeen Dervishes-kii uu hoggaaminayey Mohammed Abdullah Hassan (oo lagu naanaysi jiray "Mad Mullah" ) ka dhan ah Ingiriiska. Ingiriiska waxaa ka caawiyey weeraradoodii Xabashi iyo Talyaani. Intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad ee Adduunka (1914–1918), Xasan wuxuu sidoo kale gargaar ka helay Ottomans, Jarmal iyo, in muddo ah, oo uu ka helay Imbaraadoor Iyasu V-kii Itoobiya. Colaadda ayaa dhammaatay markii Ingriiska uu si milatari u duqeeyey magaalo-madaxda Dervish-ka ee Taleex bishii Febraayo 1920-kii.
Safarkii Shanaad ee ololihii Somaliland ee 1920-kii wuxuu ahaa safarkii ugu dambeeyay ee Ingiriisku kaga soo horjeedo xoogaggii Dervish-ka ee Maxammed Cabdillaahi Xasan (oo had iyo goor Ingiriisku ugu yeedho "Mad Mullah" sharaf dhac), hoggaamiyaha diinta ee Soomaaliya. In kasta oo dagaalkii ugu badnaa dhacay bishii Jannaayo ee sannadka, haddana ciidammada Ingiriisku waxay bilaabeen u diyaar garowga weerarkan horraantii Noofambar 1919. Ciidammada Ingiriisku waxay ka koobnaayeen xubno ka tirsan Royal Air Force iyo Somaliland Camel Corps. Dagaal seddex usbuuc ah kadib, Dervishes-kii Xasan waa la jabiyay, taasoo keentay wax ku ool ah iska caabintii 20-ka sano ahayd.
Qabsashadii Talyaanigu ee British Somaliland waxay ahayd olole milatari oo ka dhacay Bariga Afrika, kaas oo dhacay bishii Ogos 1940kii kaas oo dhex maray xoogaggii Talyaaniga iyo kuwii dhawr waddan oo Ingiriis iyo Barwaaqo-sooran ah. Socdaalkii Talyaanigu wuxuu qayb ka ahaa Ololihii Bariga Afrika
Sidoo kale eeg: Dawladii Somaliland (1960)
Sidoo kale eeg: Maalinta Madaxbanaanida Somaliland 1960
Somaliland oo markii ugu horeysay: Calanka Soomaaliya la taagay ee aha Caddaan iyo Buluugga ah ee Dabaal - degyadii Xorriyadda ee 26-kii Juun 1960 Ra'iisul-wasaaraha Dawlad-goboleedka Somaliland iyo madaxweynihii labaad ee Somaliland Muxammad Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa salaamay calanka.
Bishii Meey 1960kii, dawladda Ingiriisku waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay madax-bannaani siiso maxmiyaddii xilligaa ee British Somaliland, iyada oo ujeedkeedu ahaa in dhulku la midoobo maamulkii Talyaanigu xukumi jiray ee Somaliland ee hoos-tagi jiray Maamulkii Talyaaniga (Talyaanigii hore ee Somaliland) . Golaha Sharci Dejinta ee British Somaliland wuxuu qaraar ka soo saaray bishii Abriil 1960 oo ay ku codsanayeen madaxbannaanida iyo la midowga dhulka la aaminay ee Somaliland, kaas oo qorshuhu ahaa in ay madax-bannaanideeda hesho 1-dii Julaay ee sanadkaas. Golayaasha sharci dejinta ee labada deegaan ayaa isku raacay soo jeedintan ka dib shir wadajir ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. 26-kii Juun 1960, Maxmiyaddii hore ee British Somaliland waxay muddo kooban qaadatay madax-bannaanida iyada oo ah Dawladdii Somaliland, iyada oo Territori-ka Somaliland la raacay shan maalmood ka dib. Intii lagu jiray muddadii koobnayd ee ay la soo noqotay madax-bannaanida, Qaranka Somaliland wuxuu ka kasbaday ictiraaf shan iyo soddon iyo shan dal oo madax-bannaan. Maalintii ku xigtay, 27kii Juun 1960kii, Golaha Sharci Dejinta ee dhowaan la qabtay waxay ansixiyeen sharci si rasmi ah ugu oggolaanaya midowga Qaranka Somaliland iyo Gobollada Amaanada ee Somaliland 1dii Luulyo 1960
Xoriyadii 1960 iyo wixii kadanbeeyay
Sidoo kale eeg: Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo Soomaaliweyn
Dawlada Ethiopia ayaa waxay qorshaynaysaa sidii ay u aqoon san lahayd somalailand. Bishii febraayo 1960kii ayaa wafdi uu hoggaaminaayo Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal u anbaxaxeen dalka Ingiriiska, waxaana heshiis ay la soo galeen dawladdii ingiriiska in Somaliland xirnimo buuxda lasiiyo. 26 Juun 1960kii bay markii maxmiyadii ingriiska ee Somaliland "British Somaliland protectorate" xornimadeeda ka qaateen dawladii Ingiriiska,sida aan la socono intii ka horraysay 01 Luulyo 1960kii Somaliland waxay ahayd dawlad gooniya( indepedent state). waxayna noqdeen dawlad madax bannaan oo la aqoonsan yahay ilaa 01 Luulyo 1960kii. Isla maalintaas Koonfurtu xorayday ayaa labada dal midoobeen inkastoo midawgaas mad madaw badani ku jiro. Dad badanina u haystaan in midowgaasi ahayn mid sharciya. Bishii Luulyo1961kii waxaa dadka reer Somaliland gaashaanka ku dhufteen oo cod aqliyad ah ku diideen distoorkii qeexayey ee lagu sharciyeynaayey israaca labada dal ee Somaliya iyo Somaliland. Laakiin nasiib darro dawladdii markaas jirtay oo reer Koonfureedka ahayd waxay diideen inay aqoonsadaan maxsuulkii doorashadaas sababtoo maslaxad baan ugu jirin arrintan. Bishii december 1961 waxaa madaxdii ciidamada qalabka sida ee Somaliya isku dayeen inay dhigaan inqilaabkii dhicisoobay. Inqilaabkaasna waxay doonayeen inay kula soo noqdaan madaxbannaanidii luntay. 1967kii waxaa dalka ka noqday raysal wasaare Mohamed X.Ibrahim Cigaal. Halka uu madaxweynaha ka noqday Cabdirashid Cali sharmake. 15 Oktober 1969kii waxaa magaalada laascaanood lagu dilay madaxweynihii Jamhuuriyadda Somalida ee Cabdirashid Cali Sharmaake.
1961 kacdoon ka reer Somaliland
Sidoo kale eeg: 1961 kacdoon ka dhacay Soomaaliya
Kacdoonkii 1961 ee Soomaaliya wuxuu ahaa kacdoon aan guuleysan oo isku day afgambi ah oo ka dhacay waqooyiga Soomaaliya imikana ah Somaliland kaasoo dhacay bishii Diseembar 1961.
Inqilaabkii 21 oktober iyo wixii kasoobaxay
Waxaana midnimadii 60kii guul darro ku dhamaatay markii 21 Oktober 1969kii uu dalka ka dhacay inqilaab aan dhiig ku daadan ee ay dhigeen ciimada qalabka sidaa, waxaana talada la wareegay ciidamada oo uu hoggaaminaayo mujrimkii Gen. Mohamed Siyaad Barre. 10 januari 1970kii waxaa kelidii taliyihii Siyaad Barre sameeyey maxkamadii badbaada oo xukumi jirtay xukunka dilka si looga takhaluso dadka aan taageersanayn madaxweynaha.
21 Oktober 1970kii wuxuu Siyaad Barre ku dhawaaqay in Somaliya qaadatay nidaamka hantiwadaaga cilmiga ku dhisan. Taasoo rabay inuu ugu bedelo inqilaabkii hab ku salaysan dhaqaaq siyaasadeed oo ku salaysan aydhiyooliyadda hantiwadaaga. Waxaana loo ololeeyey wixii loogu magacdaray kacaankii hantiwadaaga Somaliyeed. Xagaagii 1972kii waxaa la sameeyey ciimadii guulwadayaasha oo ujeedadoodu ahayd inay cabudhiyaan oo xabsiga u taxaabaan dadka shacbiga ee lagu tuxmo inay kacaan diid yihiin. July 1972kii waxaa la dilay labadii Jenaraal ee Salaad Gabayle, iyo Mohamed aynaanshe oo ka tirsanaa saraakiishii inqilaabka dhigay. Salaad gabayle wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen. Waxaa lagu xukumay dil ka dib markii lagu eedeeyey inay maleegayeen shirqool ay xukunka kaga tuurayaan Siyaad Barre.
Oktober 1972kii waxaa lagu dhaqaaqay in la qoro Af-soomaliga oo uu noqdo luqadda rasmiga ah ee dalka. 1972kii-1975kii waxaa la qaaday ololihii barashada qorista Somaliga oo markii danbana isu rogay olalihii horumarinta reer miyiga ee la rabay in dadku waxna qoraan waxna akhriyaan. 1975kii waxaa la sameeyey 15 gobol oo cusub oo lagu bedelayeey 8 gobol ee hore u jiray. Waxaana ay ka koobnaayeen 78 degmo. Somaliland oo ka koobnayd 3 gobol looma samayn gobolo iyo degmooyin cusub toona. 1975kii Siyaad Barre wuxuu shaqadii ka eryey 50 saraakiil sare iyo madax ah oo badankooda ka soo jeeda Somaliland, waxaana uu ku bedelay dadka uu ku tuhmaayey inay taageersanyihiin kacaanka oo u badnaa caa'iladiisa ah. M.s.bare wuxuu ku dhawaaqay inay raga iyo dumarku siman yihiin culimadii iyo dhalinyaradii kasoo horjeedsatayna laayay dhamaantood. 1977kii maamulkii siyaad Barre wuxuu weerar ku qaaday dalka Itoobiya, waxaana markii hore uu ku guulaystay dagaalkaas. Laakiin waxaa dagaalku dhamaaday markii ciidamo Ruush iyo Kuubaan ahi usoo gurmadeenItoobiya ee ay si toosa dagaalka usoo galeen. Waxaana ciidamadii Somaliya dibuga soo noqatay dhammaan dhulkii horuu qabsadeen.
Xasuuqii Isaaq ama Xasuuqii Somaliland
Sidoo kale eeg: Xasuuqi Isaaq
Sidoo kale eeg: SNM
Haraaga la soo saaray ee dhibanayaashii xasuuqii Isaaq ee laga helay xabaal wadareed ku yaal magaalada Berbera, Somaliland.
Ilaa 90% magaalada Hargeysa (magaalada labaad ee ugu weyn Jamhuuriyadda Soomaaliya) waxaa burburiyey dawladda Soomaaliya.
Awooddii akhlaaqeed ee dowladdii Barre si tartiib tartiib ah ayay u lumisay, iyadoo Soomaali badan ay ku hungoobeen nolosha xukunka militariga. Bartamihii 1980-meeyadii, dhaqdhaqaaqyo iska caabin ah oo uu taageerayay maamulkii shuuciga ahaa ee Derg ee Itoobiya ayaa ka billowday waddanka oo dhan. Barre wuxuu kujawaabey isagoo amrey in talaabooyin ciqaab ah laga qaado kuwa uu u arko inay gudaha ka taageerayaan jabhadaha, gaar ahaan gobolada waqooyi. Qabqabashada waxaa ka mid ahaa in la duqeeyo magaalooyin, xarunta maamulka waqooyi-galbeed ee Hargeysa, oo ahayd xaruntii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed (SNM), oo ka mid ahayd aagagga la bartilmaameedsaday 1988. Duqeyntan waxaa hoggaaminayey Jeneraal Maxamed Saciid Xersi Morgan, wiilka uu sodogga u yahay Barre.
Sida laga soo xigtay Abou Jeng iyo aqoonyahanno kale, xukunkii taliskii Barre waxaa lagu calaamadeeyay cadaadis arxan darro ah oo lala beegsaday qabiilka Isaaq. Max’ed Xaaji Ingiriis iyo Chris Mullin waxay caddeeyeen in qabqabashadii maamulkii Barre ee ka dhanka ahaa Dhaqdhaqaaqii Qaranka Soomaaliyeed ee fadhigiisu ahaa Hargeysa lala beegsaday beelweynta Isaaq oo ay ka tirsan yihiin inta badan xubnihii SNM. Waxay ku tilmaamayaan isku haynta inay tahay xasuuqii Isaaq ama xasuuqii Hargeysa. Baaritaan ay sameysay Qaramada Midoobay ayaa lagu soo gabagabeeyay in dambiga xasuuqa uu ahaa "mid ay maleegtay, qorsheysay oo ay ka fulisay Dowlada Soomaaliya dadka Isaaqa". Tirada dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay waxaa lagu qiyaasaa inta udhaxeysa 50,000–100,000 sida laga soo xigtay ilo wareedyo kala duwan, halka wararka qaarna ay ku qiyaasayaan wadarta dhimashada dadka rayidka ah inay kor u dhaafeyso 200,000 oo rayid Isaaq ah. Dhimashooyinkaas, taliskii Barre wuxuu duqeeyey oo burburiyey magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya, Hargeysa iyo Burco siday u kala horreeyaan. Tani waxay u barakicisay dad lagu qiyaasey 400,000 oo dadka deegaanka ah oo u qaxay Hartasheikh ee dalka Itoobiya; shaqsiyaad kale oo gaaraya 400,000 ayaa iyaguna gudaha ku barakacay. Dagaalkii ka soo horjeedka ee taliskii Barre ee ka dhanka ahaa SNM wuxuu bartilmaameedsaday saldhigii rayidka ee kooxda mucaaradka, isaga oo isu beddelay xasuuq xasuuq ka dhan ah beesha Isaaq. Tani waxay horseeday fowdo iyo ololeyaal dagaal oo ay gaystaan ​​maleeshiyooyin kala jabay, ka dibna awooddii heer degmo la wareeray.  Cadaadiskii maamulkii Barre kuma koobnayn Isaaqa oo keliya, maxaa yeelay wuxuu bartilmaameedsanayay qabaa’illada kale sida Hawiye. Taliskii Barre wuxuu burburay Janaayo 1991. Intaa kadib, markii xaalada siyaasadeed ee Somaliland xasiloonayd, dadkii barakacay waxay ku noqdeen guryahoodii, maleeshiyooyinkii waa laga daad gureeyay ama waxaa lagu daray ciidanka, tobanaan kun oo guri iyo meherado ahna dib ayaa looga soo dhisay burburka.
Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya
Taangi M47 Patton oo ku burburay Somaliland.
Sidoo kale eeg: Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya
In kasta oo SNM markii la aasaasay ay lahayd dastuur midow, haddana waxay ugu dambayntii bilawday inay raadiso madax-bannaanida, iyada oo doonaysa inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale. Intii uu hoggaaminayey Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur, maamulka maxalliga ah wuxuu ku dhawaaqay gobollada waqooyi-galbeed ee Soomaaliya madax-bannaanida shirkii ka dhacay magaalada Burco intii u dhaxeysay 27-kii Abriil 1991-kii illaa 15-kii May 1991.
Ku dhawaaqidii Maxadbanaanida
Sidoo kale eeg: Ku dhawaaqida Gooni isu taaga Somaliland
Sidoo kale eeg: Saxeexida Baaqa Madaxbanaanida Somaliland
5 May go'aankii shirkii weynaa ee Burco. Shirkii labaad ee qaran ee 18 May, Golaha Dhexe ee SNM oo taageero ka helaya kulan ay yeesheen odayaal matalayay beelaha waaweyn ee Gobollada Waqooyi, ayaa lagaga dhawaaqay dib ula soo noqoshada Jamhuuriyadda Somaliland dhulkii Maxmiyaddii hore ee Ingiriiska ee Somaliland isla markaana la sameeyay. dowlad loogu magac daray ismaamul gobaleedka.
27 Jannayo 1991 ayaa ciidamadii SNM gacanta ku dhigeen dhamaan dalkii hore loo odhan jiray Somaliland. Dabadeedna madaxdii SNM waxay ka shaqeeyeen inay heshiiyeen oo beelihii walaalaha ee ay iska horkeentay dawladii hore ee Siyaad Barre. 18 Mey 1991 shirbeeleedkii ka dhacay magaalada Burco ayaa lagu go'aansaday lagagana dhawaaqay gooni isu taagga qaranimada Somaliland.
Afti u qaadista dastuurka Somaliland 2001
Sidoo kale eeg: 2001 Afti u qaadista dastuurka Somaliland
Digreeto madaxweyne oo uu ku ansaxinayo dastuurka Somaliland Muxammad Xaaji Ibraahim Cigaal.
Bishii Ogast 2000, Dawladdii Madaxweyne Cigaal waxay kumanaan nuqul oo ka mid ah dastuurka la soo jeediyey u qaybiyey guud ahaan Somaliland si dadku u tixgeliyaan oo dib u eegis ugu sameeyaan. Hal qodob oo xasaasi ah oo ka mid ah 130ka qodob ee dastuurka u gaarka ah ayaa ansixin doona madax-bannaanida iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland iyo kala-goynta kama dambaysta ah ee Soomaaliya, taasoo soo celinaysa madax-bannaanida qaran markii ugu horreysay tan iyo 1960. Dabayaaqadii bishii Maarso 2001, Madaxweyne Cigaal wuxuu cayimay maalinta aftida loo qaadayo Dastuurka May 31, 2001. 
Afti dastuurka ayaa laga qaaday Somaliland 31 May 2001.  Aftida ayaa loo qaaday dastuurka qabyada ah ee xaqiijinaya madaxbanaanida Somaliland ee Soomaaliya. 99.9% ee codbixiyaasha xaqa u leh ayaa kaqaybqaatay aftida waxaana 97.1% kamid ah ay ucodeeyeen dastuurka
Somaliland waxay dhacdaa Geeska Afrika, taasi oo udhexaysa dhigaha 08°00' – 11°30' waqooyiga dhulbadhaha iyo loolasha 42°30' – 49°00' ee bariga Greenwich. Waxa dhinaca galbeed ka xiga wadanka Jabuuti, dhinaca koonfureed wadanka Itoobiya, iyo dhinaca bari oo ka xigto maamul-goboleedka Puntland. Somaliland waxay leedahay xeeb-badeed dhererkeedu le'eg yahay 740 kilometres (460 mi);viyo dhul baaxadeedu le'eg yahay 176,120 km2 (68,000 sq mi). Somaliland waxa ay dhul ahaan fidsantahay 137000 km laba jibbaaran dhulaka ay ka koobantahya jamhuuriyadani waxa uu u badanyahay dhul deegaana am waaba lawada daganyahay waxa uuleeyahay buuro iyo meelo banaan ah haddii lysidhaahdo taariikhda uu wadankani lereyahay iyo taariihda uu shacabkani leeyahayba ka sheekeeya waxay noqonaysaa mid aad u dheer.
Muuqaalka juquraafiga Somaliland
Lamadaya waa biyo-dhacyo ku yaal buurta Cal Madow.
Muuqaalka Buuraha Cal Madow Buuraha, oo hoy u ah noocyo fara badan oo fara badan.
Jasiirada Ceebaad, Jasiirada Sacadaddin.
Sidoo kale eeg Gobolada Somaliland
Sanadkan 2020, Somaliland waxa ay ka kooban tahay 6 gobol, kuwaasi oo ugu weyn tahay gobolka sanaag. Gobolada somaliland intii u dhaxaysa 22 maarso ilaa 22 may, 2008, waxa uu madaxwaynihii horore ee Somaliland magacaabay gobolo cusub oo lagu daray goboladii hore ee lixda ahaa taas oo kadhigatay gobolada somaliland 13 gobol, gobolda cusub ee kuwii hore lagu daray waxa ay yihiin sidan.
1 Awdal Boorama
2 Maroodi Jeex Hargeysa
3 Saaxil Berbera
4 Togdheer Burco
5 Sool Laascaanood
6 Sanaag Ceerigaabo
Sidoo kale fiiri: Magaalooyinka Somaliland
Somaliland waxay dhacdaa waqooyiga dhulbadaha. Waa deegaan qalalan (Lamadegaan la mood), isku celceliska heerkulku yahay 25 to 35 °C (77 to 95 °F) taasi oo hesha roob dhan 446 millimetres (17.6 in) sanadkii. Deegaanada Somaliland waxaa loo qeybiyaa sadex nooc oo kala ah: (1). Guban: dhul lamadegaan qalalan (2) Oogo: xooggag sare (3) Hawd: dhul daaqsiimeed.
Faahfaahin Cimilada Hargeysa
Kuleel daran °C (°F)
Kuleel aan darnayn °C (°F)
Maalinle °C (°F)
Hoos udhaca kuleelka °C (°F)
Hoos udhac qiyaas leh °C (°F)
Roobka mm (Faro)
Source #1: Food and Agriculture Organization: Somalia Water and Land Management (temperatures, humidity and percent sunshine)
Faahfaahin Cimilada Borama
Roobka mm (Faraha)
Faahfaahin Cimilada Berbera
78 79 79 81 73 49 44 45 51 72 74 76 67
0.6 0.6 0.5 0.7 0.8 0.1 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4 5.2
80 80 80 83 83 87 80 87 87 87 87 80 83
Source #1: Arab Meteorology Book (average temperatures, humidity and precipitation), Deutscher Wetterdienst
Faahfaahin Cimilada Burco
Source #2: Climate Data.ORG
Faahfaahin Cimilada Ceerigaabo
34 35 42 56 51 48 43 49 55 43 34 37 44
1 3 6 5 8 9 1 5 15 1 2 0 56
Dowlada iyo Siyaasada
Madaxwaynaha Cabdiraxmaan Saylici
Sidoo kale eeg: Dawladda Somaliland iyo Siyaasadda Somaliland
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Ingiriiska Henry Bellingham oo la hadlaya baarlamaanka Somaliland, July 2011
Guurtidu waxay la shaqeysay hoggaamiyeyaashii jabhadda si ay u soo dhisaan dowlad cusub, waxaana lagu soo daray qaab dhismeedka dowladnimada, waxayna noqotay Golaha Guurtida ee Barlamaanka. iyo guryaha Hoose oo si saami ahaan loogu qoondeeyey qabaa'ilka iyadoo lagu saleynayo qaacido horay loo sii dejiyey, in kasta oo reeraha oo dhami aysan ku qanacsanayn matalaadooda. Sannadkii 2002, ka dib markii dhawr jeer loo kordhiyey dawladdan ku-meel-gaadhka ah, Somaliland waxay u gudubtay dimuqraadiyadda xisbiyada badan. Doorashadu waxay ku koobnayd saddex xisbi, iyada oo la isku dayayo in la abuuro doorashooyin ku dhisan fikrad halkii laga dooran lahaa qaab qabiil. Laga bilaabo Diseembar 2014, Somaliland waxay leedahay saddex xisbi siyaasadeed: Xisbiga Nabadda, Midnimada, iyo Horumarka, Xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka, iyo Wadani. Sida ku xusan dastuurka Somaliland, ugu badnaan saddex xisbi siyaasadeed ayaa loo oggol yahay.
Fulinta waxaa hogaamiya madaxweyne la soo doortay, oo dowladdiisa ay ka mid yihiin madaxweyne-ku-xigeen iyo Golaha Wasiirrada. Golaha Wasiirrada, oo mas'uul ka ah howlaha caadiga ah ee dowladda, waxaa soo magacaaba Madaxweynaha, waxaana oggolaada Golaha Wakiillada ee Baarlamaanka. Madaxweynuhu waa inuu ansixiyaa hindise sharciyeedyada ay ansixiyeen Baarlamaanku intaanay dhaqan gelin. Doorashada madaxtinimada waxaa xaqiijiyey guddiga doorashooyinka qaranka ee Somaliland. Madaxweynaha wuxuu shaqeyn karaa ugu badnaan laba xilli oo shan sano ah.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur, wuxuu hoolka ka baxayaa isaga iyo madaxweynaha cusub ee la doortay Muxammad Xaaji Ibraahim Cigaal. C / Raxmaan Axmed Cali Tuur waxaa oday ugu hambalyeeynayaa go, aankiisa ah inuu aqbalo natiijada doorashada isla markaana si nabadgelyo ah isu soo taago kadib maalmo dhowr dood adag iyo gorgortan.
Golaha Wakiilada (Aqalka Hoose) ee Baarlamaanka Somaliland. Awooda sharci dejinta waxaa leh baarlamaanka labada aqal. Aqalkiisa sare waa Golaha Guurtida, qolkan waxaa gudoomiye ka ah Suleiman Mohamoud Adan, aqalka hoose waa Golaha Wakiilada. Aqalka hoose waxaa gudoomiye ka ah Baashe Maxamed Faarax. Guri kasta wuxuu leeyahay 82 xubnood. Xubnaha Golaha Guurtida waxaa si dadban u doorta beelaha deegaanka muddo lix sano ah. Golaha Guurtidu wuxuu la wadaagayaa awooda gudbinta shuruucda Golaha Wakiilada, sidoo kale wuxuu leeyahay doorka xalinta khilaafaadka gudaha, iyo awood gaar ah oo lagu kordhiyo muddada Madaxweynaha iyo wakiilada iyadoo lagu jiro duruufaha doorashada ka dhigaya mid aan macquul aheyn. Xubnaha Golaha Wakiillada waxaa si toos ah u doorta dadku shan sano. Golaha Wakiiladu wuxuu la wadaagayaa awooda codbixinta Golaha Guurtida, in kasta oo ay soo saari karaan sharci Golaha Guurtidu diidayo hadii ay u codeeyaan sharciga aqlabiyada 2/3, waxayna awood buuxda ku leeyihiin arimaha dhaqaalaha iyo xaqiijinta magacaabista Madaxweynaha. (marka laga reebo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare).
Nidaamka garsoorku wuxuu u qaybsan yahay maxkamadaha degmada, (oo ka hadlaya arrimaha sharciga qoyska iyo isku xigxiga, dacwadaha oo gaaraya ilaa 3 milyan oo SL ah, kiisaska ciqaabta oo ciqaabtiisu tahay ilaa 3 sano oo xarig ah ama 3 milyan oo ganaax lacageed ah oo SL ah, iyo dambiyada ay galaan dhalinyarada) , maxkamadaha gobolka (kuwaas oo ka shaqeeya dacwadaha iyo kiisaska ciqaabta ee aan ku hoos jirin xukunka maxkamadaha degmada, sheegashooyinka shaqada iyo shaqaalaynta, iyo doorashooyinka dawladaha hoose), maxkamadaha rafcaanka ee gobolka (kuwaas oo wax ka qabta dhammaan rafcaannada ka imanaya maxkamadaha degmooyinka iyo gobollada), iyo Maxkamadda Sare (kaas oo ka hadlaya arrimaha u dhexeeya maxkamadaha iyo dawladda, isla markaana dib u eegis ku sameeya go'aannadeeda), oo ah maxkamadda ugu sarraysa sidoo kalena u shaqaysa sida Maxkamadda Dastuuriga ah.
Sharciga Jinsiyadaha Somaliland wuxuu qeexayaa qofka muwaadin Somaliland ah,
Haweenka reer Somaliland, oo xidhan midabada calanka Somaliland, ka hor doorashadii baarlamaanka ee 2005. Dawladda Somaliland waxay sii waddaa inay ku dhaqanto xeerka ciqaabta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya 1962dii. Sidan oo kale, falalka khaniisiinta ayaa sharci darro ka ah gayiga.
Guriga Freedom wuxuu ku qiimeeyaa dawladda Somaliland qayb ahaan dimuqraadiyadda. Seth Kaplan (2011) wuxuu ku doodayaa in si ka duwan koonfurta Soomaaliya iyo dhulalka ku dhow, ay Somaliland, gooni u goosadka waqooyiga-galbeed ee Soomaaliya, ay ka dhistay qaab dimoqraadi ah oo maamul hoosta ilaa kor, iyadoo aan haba yaraatee lahayn wax kaalmo shisheeye ah. Si gaar ah, Kaplan wuxuu soo jeedinayaa in Somaliland ay leedahay nidaamka siyaasadeed ee ugu dimuqraadiyadda wanaagsan geeska Afrika maxaa yeelay waxaa inta badan laga soo cayimay cunsuriyiinta xagjirka ah ee ka jira Soomaaliya inteeda kale waxayna leedahay hanaan doorasho iyo sharci dejin iyo sidoo kale nidaam gaar ah oo adag.
Sidoo kale eeg: Xidhiidhka Dibada ee Somaliland
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi, ayaa booqasho ku tegey Jamhuuriyadda Guinea.
Somaliland waxay xidhiidh siyaasadeed la leedahay dalalka deriska la ah ee Itoobiya iyo Jabuuti, Jamhuuriyadda Shiinaha oo aan xubin ka ahayn Qaramada Midoobay, iyo sidoo kale Koonfur Afrika, Sweden, Boqortooyada Ingiriiska iyo waddan yar oo Liberland ah. 17-kii Janaayo 2007, Midowga Yurub (EU) wuxuu wafdi u diray arrimaha dibedda si ay uga wada hadlaan iskaashiga mustaqbalka. Midowga Afrika (AU) wuxuu kaloo diray wasiir arrimo dibadeed si uu ugala hadlo mustaqbalka ictiraafka caalamiga, 29kii iyo 30kii Janaayo 2007, wasiiradu waxay sheegeen inay ictiraafka kala hadli doonaan dowladaha xubnaha ka ah ururka. Horraantii 2006, Golaha Qaranka ee Wales ayaa casuumaad rasmi ah u fidiyay dawladda Somaliland si ay uga soo qayb galaan furitaanka boqortooyada ee Senedd ee Cardiff. Tallaabadan ayaa loo arkay inay tahay tallaabo ay Golaha Welsh ku aqoonsadeen sharcinimada dowladda gooni u goosadka ah. Xafiiska Arimaha Dibadda iyo Barwaaqo Sooranka ayaanan wax faallo ah ka bixin casuumaada. Gobolka Wales waxaa ku nool jaaliyad Soomaali ah oo muhiim ah oo ka timid Somaliland.
Sanadkii 2007, wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Kaahin ayaa goobjoog ka ahaa shirkii madaxda dowladaha xubnaha ka ah Barwaaqo Sooranka ee ka dhacay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda. In kasta oo ay Somaliland codsatay ka mid noqoshada Barwaaqa Sooranka iyada oo ku hoos jirta xaalad goobjooge, codsigeedii weli waa la sugayaa.
Khariidada xafiisyada diblomaasiyadeed ee Somaliland
Dowladdaha leh qunsuliyadda ama xafiiska wakiilka ee Somaliland
24 Sebtember 2010, Johnnie Carson, Kaaliyaha Xoghayaha Arimaha Dibada ee Arimaha Afrika, wuxuu sheegay in Mareykanku uu wax ka badalidoono istiraatiijiyaddiisa Soomaaliya uuna raadinayo xiriir qoto dheer oo uu la yeesho dowladaha Somaliland iyo Puntland isagoo sii wadaya taageerida Dowlada KMG ee Soomaaliya. Carson wuxuu sheegay in Mareykanku u diri doono shaqaalaha gargaarka iyo diblomaasiyiinta Puntland iyo Somaliland wuxuuna si toos ah u sheegay suurtagalnimada mashaariic horumarineed oo mustaqbalka ah. Si kastaba ha noqotee, Carson wuxuu carabka ku adkeeyay in Mareykanku uusan u fidin doonin aqoonsi rasmi ah labada gobol midkoodna.
Madaxweyne Siilaanyo ee Somaliland bishii Noofambar 2010 si uu ugala hadlo sidii loo kordhin lahaa wax ka qabashada Ingiriiska ee Somaliland. Madaxweyne Siilaanyo wuxuu yidhi safarkiisii ​​London “Waxaan la shaqeynaynay beesha caalamka beesha caalamkuna way nala shaqeyneysay, annaga oo bixinayna anaga oo naga caawinay kanala shaqeynayna barnaamijyada dimoqraadiyeynta iyo horumarka. Waxaan aad ugu faraxsanahay sida bulshada caalamku ay noola macaamileen, gaar ahaan UK, Mareykanka, quruumaha kale ee Yurub iyo deriskeena oo weli raadinaya ictiraaf Ictiraafka Somaliland ee Boqortooyada Midowday (UK) waxa kale oo taageeray Xisbiga Madaxbanaanida ee UK, oo ku soo galay kaalinta 3aad ee codadkii dadweynaha ee doorashadii guud ee 2015. Hogaamiyaha UKIP, Nigel Farage, ayaa la kulmay Cali Aadan Cawaale, Madaxa Ergada Somaliland ee UK Uk maalinta qaranimada Somaliland, 18 May, 2015, si ay u muujiyaan taageerada UKIP ee Somaliland. Nigel Farage wuxuu yidhi “Somaliland waxay 24-kii sano ee u dambeeyay u ahayd ilayska nabada, dimuqraadiyada iyo ku dhaqanka sharciga, ee Geeska Afrika 24-kii sano ee la soo dhaafay. Waxay ku beegan tahay wakhtigii UK iyo bulshada kale ee caalamku aqoonsadeen qadiyada Somaliland ee aqoonsiga. Waa waqtigii nabada la abaalmarin lahaa. In UK ay dhabarka u jeediso dalabkooda sharciga ah ee madaxbanaanida, waa khalad, waa wax aan caadi aheyn inaanan u ololeynin aqbalitaankooda Barwaaqo Sooranka. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan taageernay aqbalida dalal ay ka mid yihiin Mozambique oo aan xidhiidh taariikhi ah la lahayn Ingiriiska, laakiin Somaliland, oo hore u ahaan jirtay maxmiyad ayaa hartay qabow. Tani waa inay isbedeshaa".
Wasiirka Arimaha Dibada Somaliland Hagi Mohamoud oo uu weheliyo Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen.
Sannadkii 2011, Somaliland iyo gobolka deriska la ah ee Puntland wuxuu mid waliba la galay heshiis is-afgarad oo la xiriira nabadgelyada Jasiiradda Seychelles. Iyadoo la raacayo qaab dhismeedka heshiis hore oo ay kala saxiixdeen Dowladda Federaalka Ku Meel Gaarka ah iyo Seychelles, qoraalka ayaa ah "in dadka la xukumay loo wareejiyo xabsiyada 'Puntland' iyo 'Somaliland'.
1dii Julay 2020, Somaliland iyo Taiwan waxay kala saxeexdeen heshiis lagu aasaasayo xafiisyo wakiillo ka shaqeeya si kor loogu qaado iskaashiga labada dal. Wadashaqeynta labada siyaasadood ee ku saabsan waxbarashada, amniga badaha, iyo daawada waxay bilaabatay 2009, shaqaalaha Taiwan waxay soo galeen Somaliland Febraayo 2020 si ay ugu diyaar garoobaan xafiiska wakiilka.
Sidoo kale eeg: Doorashooyinka Somaliland
Doorashooyinka Somaliland qof iyo cod
Burburkii dowladdii militariga ee ka talineysay Soomaaliya 1991 AD, hoggaamiyeyaashii Dhaqdhaqaaqa Waddaniga Soomaaliyeed waxay qaadeen tallaabo ay ku dhawaaqeen gooni u goosadka gobolka woqooyi ee Soomaaliya, oo markaas ku jiray shan gobol oo ka tirsan Soomaaliya inteeda kale, isla sannadkaas. . Intaa wixii ka dambeeyay, Somaliland waxay ku guuleysatay inay gaarto dib u heshiisiin dhab ah oo dhex marta beelaha wada dega gobolka, waxayna ka shaqeysay fidinta amniga, kala dambeynta iyo sharciga, waxayna ku ansixisay dastuurkeedii ugu horreeyay afti laga qaaday 2001. Waxay sidoo kale abaabushay, xilliyo kala duwan, bilaash iyo doorashooyin guuleysta oo ay kujiraan doorashooyinka dowladaha hoose, sharci dejinta iyo madaxweynaha.
Waxa wadankan ka dhacay doorashooyin madax banaan oo shacabku si run ah ay u dooranayeen waxa kale oo horay uga dhacay somaliland doorashooyin doorashaddii, uguhoraysay ee kadhacady somaliland waxa ay hayd dheceen sanadii 1997 waxca ku gulaystay madaxwayne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal doorashada labaad ee kadhacady somalilad waxa ay dhacday sanadii 2003 halka tii sadexaad oo ah in ay jabisay rikoodhkii u yaaly afrika oo ahaaa in laba doorasho oo isku xiga wax kacadani aany wadan afrikaana kadhici iyada oo lagu yaqaanay in haddii doorasho sadexaad loodhaqaaqo uu wadankasta oo afrika kuyaala dagaal sokeeye ka bilaabmi jiray . ayaa wadanka somaliland waxa uu marayaa doorashaddii sadexaad ee si habsamiya uga dhacda doorashadan ugu danbaysay waxa ay djacday sandkii aynu soodhaafanay ee 2010ka waxaana madaxwayne loo doortay mujaaahidka wayn ee axmed maxamed maxamuud siilaanyo
Sidoo kale eeg: Ciidanka Qaranka Somaliland
Haweenka Ciidanka Somaliland.
Ciidamada Somaliland (Ciidanka Qaranka) Somalilanad waxa ay leedahay ciidan militari oo si habaysan u tababaran kaas oo ah ilaaliyaha koobaad ee ciida somaliland. ciidamada somaliland waxa ay fadhiisimo iyo saldhigyo ku leeyihiin dhamaan wadanka. ciidamada somaliland waxa ay leeyhiin dhamaan qaybaha ciidan ee wadan yeesho. waxaa sharci ahaan loo ogolyahay dadka wixii kawayn 18 ilaa 49 ciidanka somaliland waxa lagu qiyaasaa ilaa 20.000 oo askari. Ciidamada somaliland waxay ka qaybqaatan ilaalinta ciidooda taaso oo ah arin muqaddas ah.
Sidoo kale eeg: Astaanta Qaranka Somaliland
Astaanta Qaranka Somaliland
Astaanta Qaranka Somaliland waxaa la abaabulay Oktoobar 1996dii, ayada iyo calankaba. waxa ay kakoobantahay laba kafadood iyo miisaan isleeg, oo muujinaya cadaalda dhextaala shacabka somaliland iyo gorgor sare u haya miisaanka oo isna tusaale u ah dimuquraadiyada ay somaliland kudhaqanto waxa kale o kamida astaanta qaranka laba gacmood oo issisalaamya. waxaanay tasi tusaale u tahay sinaanta iyo cadaalada iyo dimuquraadiya dhextaala dadka reer somaliland waxa kale oo kamida calaamdaha ay kakoobantahay astaanta qaranka somaliland laan geed oo muujinaysa nabada ay haystaan shacabku waxa kale oo kamida halka danbe oo ah huruud taas oo muujinaysa dhaqan wanaaga shacabka somaliland waxa kale oo walaiba kamida bisinka oo kaga yaala halka sare oo muujinaya in shacabka somaliland ay yihiin dad islaama.
Sidoo kale eeg: Calanka Somaliland
Calanka Somaliland waxa markii uguhoraysay la isticmaalay calanka somaliland ee xilagan 14 0ktoba 1996kii waxa uu calanka somaliland ka koobanyahay sadex khad ama kald oo jiif ah waxa ugu koreeya cagaar waxa cadaan oo dhexda ah iyo casaan oo hoosta ah dehexdana waxaa kaga taala calanka xidig madaw waxa dhanka sare ee calanka ku taala shahaadada (لا إله إلا الله, محمد رسول الله) oo far cad kuqoran Heesta calanka samo kuwaar waa heesta calanka somaliland ee hada waxaana loogu dhawaaqaa sidan
Samoo ku waar samoo ku waar
Sareeye calanka sudhan biley dhulkissa
Samoo ku waariyo iyo bogaadin sugan
Hambalyo suuban kugu salaanee samoo ku waar
Geesiyaashii naftooda u sadqeeyey qaranimadad somaliland
Xuskooda dhawrsan kugu salaanee samoo ku waar
Guul side xambaarsan soo noqoshaddiisa
Kalsooniduu mutaystayee dastuurka
Distuurka ku salaan kugu salaanee
Midnimo walaalnimo gobonimoo
Islaamnimo kugu salaanee
Samoow saamidiyo samoo ku waar
Samoo ku waar saamo ku waar
Sidoo kale eeg: Maalinta Madaxbanaanida Somaliland
Haweenka Somaliland oo ka qayb galay dabaaldeggii maalinta madaxbanaanida oo ay la socdaan calanka Somaliland.
Maalinta xoriyada Somaliland waa maalinta ee maamulka Goboleedka la aqoonsan ee u dabaaldagto xoriyada ee aaminsanyihiin in ee ka heleen soomaaliya isla markaasneh ee ka go'een soomaaliya inteeda kale.Xuskii ugu danbeeyay waxee dhacday 18 may 2011.
Sidoo kale eeg: Dhaqaalaha Somaliland iyo Dekada Berbera
SBI Warshada Coca–Cola Somaliland.
Dekada Berbera Cusub ee DP World Berbera.
Somaliland shilling waa lacagta laga isticmaalo somaliland waxa lahirgaliyay daabacaada iyo isticmalka lacagtan, 18 aktobar 1994, waxa ay ka koobantahay lacagta somaliland waraaqo iyo biro kal ah sidan soo 1,5,10,20,100,500, iyo 5000 Sidan lawada socono astaanta qaranku waa shayga kaliyata ee lagu garto dawlad amaba lagu aqoonsado qaran keena, somaliland waxuu leeyahay astaan iyo lacag u gaar ah taa oo uu kaga duwan yahay bulshada caalamka iyo Gobolka geeska afrikaba, hadaba tan iyo waxii ka adan beeyay sanadkii 1991 somaliland waxay lahayd lacag u gaar ah taasi oo aan gabi hanba wada gaadhin gobolada somaliland oo dhan , iyadoo inta badan ku kooban hargaysa oo ah caasimada somaliland. halka aan lagaba aqoon gobola da kale dalka sida gobolada Bariga ee ay ka mid ka yihiin gobolka togdheer,sanaag iyo sool ,waxaana laga isticmalaa badiba lacago qalaad oo kala duwan ku wasi oo iskugu jira lacagta itopiyanka iyo lacagtii faqashta ee soomaliyadii hore, dhinacakale waxad arkaysaa markaad tagto magaloyinka aan kor ku soo xusay iyo qaar kaleba inaad markaad dhex marayso goobaha lacagaha lagu sarifo anad arkayninba wax lacag shilinka somalialand ah mana jiraan lacago somaliland ah oo ay indha haagu qabanayaan, dhinacakale´shilinka somaliland hadad is tidhaah do suqa wax kaga so iibso ama ba wax kaga soo cun hotelada laga cunteeyo lagama yaabo inaad wax lagaga iibiyo, waxa yaduna nasiib daraa in qaar kamid ah lacagta shilinka somaliland ah guud ahan ba wadanka gudihiisa lagama qaato xataa casimada inana waxba lagaga iibin ibin mayo lacagtaas oo inta badan musha har loo ´siyo ciidamada qaranka marka ay isku dayaan inay ku soo adeegtana aan lagaqadan lacagtaas aan kor ku soo xusayna waxa kamid ah 5ta´shilin 10´ka shilin iyo 20´ka shilin lacagtasi la diidayaana waa lacagtii qaranka hadaba, waxa nasiib Daraa inay somaliland ku faanto inay hormar ka gaadhay dhinacyo badan sida dimuqraadiyada ´ dhaqaalaha´ Tignolajiyada iyo waxbarashada, hadana hormar ay gaadho iska dhaafo ay lacagteedii ayaa weli saaran Geedka Madhaafto
Hawlaha sahaminta shidaalka iyo gaaska ee Oodwayne, gobolka Togdheer.
Bishii Ogosto 2012, dawladda Somaliland waxay siisay Genel Energy ruqsad ay shidaal uga baadhi karto dhulkeeda. Natiijooyinka baadhitaanka sagxadda oo la dhammaystiray horraantii 2015 waxay xaqiijiyeen suurtagalnimada waxqabad ee ka jirta SL-10B iyo baloogga SL-13 iyo baloogga Oodweyne oo lagu qiyaasay keyd shidaal oo midkiiba gaarayo 1 bilyan oo foosto.  Shirkadda Genel Energy ayaa qarka u saaran inay si fiican u qoddo sahaminta SL-10B iyo SL-13 xannibaadda Buur-Dhaab oo 20 kiiloomitir waqooyi-galbeed ka xigta Caynabo dhammaadka 2018. 
Somaliland waxa ay leedahay warbaahin madaxbanaan oo aanay cidi kormerin haba yaraatee war baahintaasi waxa ay isugu jirataaa warbaahinta la akhriyo tan ladaawdo iyo tan la dhagaysto. kuwa ugu waawayn ama ugu caansana waxa kamida, wargayska jamhuuriya wargayska haatuf, tv ga horm kabel tv iyo shabakadda wararka caalamiga ah ee xoriyonews.com waxa jira warbaahin kale oo aad iyo aad u fara badan oo wadanka ka jira ciidamada qarnka ee somaliland waxa ay u kalabaxaan sida aan horeba usoo sheegnay qaybaha ciidan ee uu wadan yeesho
Dawlada Ethiopia ayaa la filaayaa inay bisha tobnaad aad aqoonsato somaliland sida lagu baahiayay boga internetka ee ay dawaldu maamusho. Isgaadhsiinta Somaliland Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland	Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland oo si rasmiya ugu Dhawaaqay inay Isu- Fureen Adeegyadoodii Taleefoonada iyo Madaxweyne Ku-xigeenka oo ka qayb galay Xafladii lagu Daah-furay. Munaasibada lagu Daahfurayay Isku-xidhka Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland ayaa lagu qabtay Hoteelka Maansoor ee Magaalada Hargeysa. Xafladan oo lagaga dhawaaqay isku-xidhka shan Shirkadood oo ka mid ah Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland oo kala ah Somtel, Nation Link, Telcom, Soltelco, African Online., waxa ka qayb galay Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan Saylici, Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Axmed Xaashi Oday, Wasiirka Diinta iyo awqaafta Sh. Khaliil C/laahi, Maareeyaha Hawlaha shaqada ee Shirkadda Somtel Cali Saalax Cabdi, Mahdi Daahir Jaamac oo ah Maareeye ku-xigeenka Shirkadda Nation-link, Madax Shirkada Telcom Aadan C/laahi, Mareeyaha Shirkada Soltelco Mukhtaar Osman iyo Marti sharaf kale. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan C/lahi Ismaaciil oo Munaasibadaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isku xidhka shirkadahan isgaadhsiinta oo wax badan ka tari doona dhibaatooyinkii Bulshada ka haysatay dhinaca Isgaadhsiinta, gaar ahaan wada hadal la’aanta dadka isticmaalada adeegyada kala duwan ee Shirkadaha Isgaadhsiinta. Waxaanu yidhi “Runtii waxa maanta Farxad ii ah inaan ka soo qayb galo, isku xidhkii shirkadaha Isgaadhsiinta oo runtii baahi weyn loo qabay inaynu ku wada xidhiidhno, iyadoo laga maarmayo sadexdii Telefoon iyo afartii Telefoion ee markii hore la sitay, arintan oo runtii ka mid ahayd balanqaadyadii Xisbiga Kulmiye ee in adeegyada Bulshada la mideeyo”. Mr. Saylici isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay “Maanta waxaan ku faraxsanahay in talaabada koowaad ee la qaaday inteedii badnaydna Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiintu halkan ka sheegay , shirkadaha laftoodiina ay ka marag kaceen, muhiimada aynu u soconaana waxay tahay inaynu shacbigeena u wada adeegno oo aynu ka saarno qoqobkii ku kala jiray ama kala xidhnaantii ku kala jirtay ,maadaama oo suuqeenu yahay suuq mid xor ah, waxaan qabaa inaanu dawladu mar walba ka madhnayn shirkadaha isgaadhsiinta oo waxa loo sameeyaa Cashuur dhaaf”. Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Axmed Xaashi Oday oo Munaasibadaasi ka hadlay ayaa sheegay sheegay in Wasaarada Boosaha iyo isgaadhsiintu si isku mid ah u maamuli doonto iska Xidhka Shirdahan adeegyadooda Xidhiidhka laysku furay, isagoo hoosta ka xarriiqay inay si caadalad iyo sinaan ah ay u ilaalin doonaan dhamaan shirkadahan xuquuqdooda Ganacsi iyo sirta Adeegyadooda. Guddoomiyaha Guddidii ka soo shaqaysay isku xidhka shirkadahan Isgaadhsiinta ee mideeyay Adeegyadooda Isgaadhsiinta Mr: Jaamac X. Maxamed Cigaal ayaa isna munaasibadaasi ka sheegay qaabka ay dadku ugu wada Xidhiidhayaan shanta shirkadood ee laysku xidhay, waxaanu halkaasi ku soo
Maalmaha la Xuso
1- 26 Juun oo ah maalinta ay ka qadatay xornimada gumaysigii Ingiriiska.
2- 18. May maalinta xoriyada somaliland oo ku beegan 18.May.1991 kii maalintii shirweynihi shacabka reer somaliland gua'an sadiin guuni isotaga jumhuriyada somaliland ee ka dhacay Magaalada Burco.
3- Labada Ciidood ee Islaamka
4- Maalmaha Caalamiga ah sida maalinta shaqaalaha, Aydhiska, iwm.
Luqadaha Somaliland Somaliland waxa lagaga hadlaa luqada somaliga oo boqolkiiba boqol ay kuhadalaan dadka kudhaqan somaliland waliba lahjada afsoomaaliga ugu nadiifsan amaba ugu dhaw marka laeego luqada somaliga ee qadiimka ah dadka kudhaqan somaliland lahjada afsomaliga ee ay kuhadlaan waxa ay shabahdaa ta wararka lagusiidaayo amaba saxaafada loo adeegsado. waxa kale oo somaliland lagaga hadlaa Carabiga iyo Ingiriisiga oo ah laba luqadood oo iyana wadanka si rasmi ah looga isticmaalo, qodobka lixaad ee wadanka uyaala waxa kuqoran in somaliga carabiga iyo ingriisugu ay yihiin sadaxda luqadood ee wadanka sirasmi ah looga isticmaali karo
Sidoo kale fiiri Jaamacadaha Somaliland
Jaamacada New Generation
Jaamacadda Culuunta badda iyo Kaluumaysiga (BERBERA MARITIME AND FISHERIES ACADEMY)
Dalka Somaliland wuxu leeyahay deegaan ballaadhan oo dhul badhka uu ku fadhiyo lagu qiyaaso 136200KM2 iyo bad leh xeeb dhererkoodu dhanyahay 850Km2 laga bilaabo Lawyacaddo dhinaca galbeed illaa Ceelaayo dhinaca bari. Somaliland waa qaran ka nasiib badan qoomiyado badan oo caalamka ah marka laga eego cimillada iyo hawada meel dhexadka ah xilli kasta, dhulka fidsan iyo deegaanka kala nooc nooca ah. Goobaha aad loo dalxiiso ee Somaliland waxa ka mid ah daljirka dahsoon ee Hargeysa ku yaalla, dhammaan magaalooyinka qadiimiga ah ee dalka sida Berbera, xaruntii daraawiishta talex, Zeilac, Bullaxaar, Maydh & Xiis, Laas-qoray, jasiiradaha Sacaadadiin iyo ceebood, buurta Daallo, buurta Gacan-libaax (Waxa waliba lagu sameeyay dhisme iyo dayactir buurta dusheeda( buurta Saw, Laasgeel (Goob aasaar qadiimi ah oo sannad dhawaa khubaro faransiis ahi ka heleen degmada hore loo odhan jiray Dacar-budhuq, haddana loogu magac daray Laasgeel) ɖɦaɦaʀ ɖɦʊʟҡɨɨ զʊʀʊxɖa ɖaʀɨstɨɨ զʊʀxօօռaʏɖ ɖɦaɦaʀ ċʀɛɛռʟaռɖ iyo goobo kale oo aan xusi doonno. Waxannu ugu bushaaranaynaa soo booqdayaasha bartan inaanu boggan idiin ku soo gudbin doonno xogo iyo macluumaad faahfaahsan oo la xidhiidha dhammaan goobaha taariikhiga ah ee la dalxiiso Somaliland, xaqiiqooyin ku xeeran iyo is bedello ku yimi goobo ka mid ah.
Guud ahaan, gobolkasta Somaliland waxa ka jira goobo caana ah, taariikhi ah ama lagu tilmaami karo fursadaha iyo/ama khayraadka qaaliga ah ee dalku leeyahay dhinaca dalxiiska iyo taariikhda. Laasgeel waa goob leh godod hoose oo leh xaradh iyo astaamo qadiimiga ah oo lagu qiyaasay inay noqon karayaan aasaarta taariikhiga ah ee ugu da’da weyn geeska ama qaarada Afrikaba guud ahaan marka loo eego sawirrada farshaxanka iyo astaamaha muujinaya quruumo qarniyaal badan ka hor dhulka ku noolaa. Aasaartan qadiimiga ah waxa goobtan ku ogaaday khubaro faransiis sannadkii 2002, illaa immikana waxay ka midtahay goobaha taariikhiga ah ee aad loo dalxiiso, isla markana ay Wasaaradda Dalxiiska iyo Dawladda xaqiijiyaan nabadgelyada iyo ilaalinta aasaartan iyadoo si taxadir leh loogu oggolaado dalxiisayaashaa gaarka ah.Goobta Laasgeel waxa 6km woqooyi looga weecdaa tuulada Dhubato ee Degmada Laasgeel ee hore loo odhan jiray Dacar-budhug, immikana loogu magac daray Laasgeel oo 55KM bari ka xigta Hargeysa, kuna taalla wadada halbawlaha ah ee Hargeisa-Berbera.
Ciyaaraha Somaliland Tartanka ciyaaraha somaliland oo ah mid sanadkiiba mar laqabto ayaa sanadkan ahaa mid xiiso leh,waxa sanadkan kamid ahaa ciyaaraha lagusoo bandhigay sida ciyaaraha orodada Kubada cagta Kubada Kolayga iyo waliba qaarkale oo badan.waxa sanadkan ciyaaraha 2011 ciyaaraha somaliland lagu qabtay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee magaalda Burco gaar ahaan garoonka ciyaaraha ee caanka ah ee looyaqaano Alamsay.
Kahor intii aan lasoo gaadhin ciyaaraha kama danbaysta ah waxa lasoomaray isreebreeb ay ka qaybqaateen dhamaan gobalada Somaliland waxaana iskusoo hadhay sideedan Gobol oo soo bandhigay ciyaaro aad iyo aad u xiiso lahaa waxaa ay ahyd markii ugu horaysay ee ciyaaraha somaliland sitoosa caalamkka looga daawado waxa siidaynta ciyaarta hawada dadaka usoo marinayaay warbaahinta qaranka iyo tan madaxa banaan waxaana laga daawanayay daafaha caalmaka.
Buurta Cal Madow
Oodwayne Beeraha Salidka
Qaran News Archived Oktoobar 4, 2006 // Wayback Machine
Jamhuuriya Newspaper Archived Abriil 19, 2011 // Wayback Machine
↑ Name used in The Constitution of the Republic of Somaliland and in Somaliland Official Gazette
↑ http://www.somalilandtimes.net/sl/2006/270/3.shtml. Soo qaatay 28 March 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ http://somalilandgov.com/somaliland-geography/. Soo qaatay 28 March 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ REPORTER, I. (2012, September 18). As Somalia Struggles, Can Neighboring Somaliland Become East Africa's Next Big Commercial Hub? Retrieved December 26, 2015, from http://www.ibtimes.com/somalia-struggles-can-neighboring-somaliland-become-east-africas-next-big-commercial-1407582"> . September 18, 2013 http://www.ibtimes.com/somalia-struggles-can-neighboring-somaliland-become-east-africas-next-big-commercial-1407582. Soo qaatay December 26, 2015. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ World Bank. New World Bank GDP and Poverty Estimates for Somaliland January 29, 2015. Accessed February 14, 2015.
↑ . Central Intelligence Agency. 14 May 2009 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html. Soo qaatay 31 May 2009. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ Jouneys by Design https://journeysbydesign.com/destinations/somaliland/when-to-go. Soo qaatay 12 March 2020. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ (PDF) http://slministryofplanning.org/images/Statistics/SomalilandInfigures2015.pdf. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ (PDF). Food and Agriculture Organization. pp. 69–73 https://web.archive.org/web/20161104142616/http://www.faoswalim.org/resources/site_files/W-01%20Climate%20of%20Somalia_0.pdf. Waxaa laga kaydiyay the original (PDF) 4 November 2016. Soo qaatay 4 November 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ . Food and Agriculture Organization https://web.archive.org/web/20161005063105/http://sddr.faoswalim.org/downloads/Long%20Term%20Mean_Monthly__sunshine%20fraction.xls. Waxaa laga kaydiyay the original 5 October 2016. Soo qaatay 4 November 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ (PDF). Deutscher Wetterdienst http://www.dwd.de/DWD/klima/beratung/ak/ak_631700_kt.pdf. Soo qaatay 4 November 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ (PDF). Somalia Water and Land Information Management Project. June 2009. p. 10 https://web.archive.org/web/20131005010751/http://www.faoswalim.org/ftp/Land_Reports/Cleared/L-12%20Land%20Resources%20of%20Somalia.pdf. Waxaa laga kaydiyay the original (PDF) 5 October 2013. Soo qaatay 1 October 2013. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "Nuqul Archive" (PDF). Springer. Waxaa laga kaydiyay the original (PDF) 4 March 2016. Soo qaatay 22 October 2016. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ (PDF). Deutscher Wetterdienst http://www.dwd.de/DWD/klima/beratung/ak/ak_631600_kt.pdf. Soo qaatay 22 October 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ . Food and Agriculture Organization https://web.archive.org/web/20161005063105/http://sddr.faoswalim.org/downloads/Long%20Term%20Mean_Monthly__sunshine%20fraction.xls. Waxaa laga kaydiyay the original 5 October 2016. Soo qaatay 4 November 2011. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ . Weatherbase http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=631750&refer=wikipedia. Soo qaatay 24 November 2011. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ . Climate-Data.org http://en.climate-data.org/location/907/. Soo qaatay 28 December 2013. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ (PDF). Deutscher Wetterdienst http://www.dwd.de/DWD/klima/beratung/ak/ak_631800_kt.pdf. Soo qaatay 4 November 2016. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay [http: //www.genelenergy.com/operations/exploration-assets/somaliland/ the original] Hubi |url= value (caawin) 4 August 2017. Soo qaatay 3 August 2017. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin); Barameter aan la aqoon |Archive-date= ignored (|archive-date= suggested) (caawin); Barameter aan la aqoon |url-status= ignored (caawin)
↑ (PDF). Genel Energy [https: / /web.archive.org/web/20170104062357/http://www.genelenergy.c om / media / 1977 / genel-energy-onshore-somaliland-fursad-summary_digital.pdf https: / /web.archive.org/web/20170104062357/http://www.genelenergy.c om / media / 1977 / genel-energy-onshore-somaliland-fursad-summary_digital.pdf] Hubi |archive-url= value (caawin). Waxaa laga kaydiyay [http: // www. genelenergy.com/media/1977/genel-energy-onshore-somaliland-opportunity-summary_digital.pdf the original] Hubi |url= value (caawin) (PDF) |archive-url= u baahan |archive-date= (caawin). Barameter aan la aqoon |url-status= ignored (caawin); Barameter aan la aqoon |taariikhda-taariikhda= ignored (caawin); Barameter aan la aqoon |marin-u-helid= ignored (caawin); Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Soomaaliland&oldid=215006"
Last edited on 9 Agoosto 2021, at 01:52
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 01:52.